Arday Deeq Waxbarasho Helay Oo Suudaan U amba baxay (DAAWO MUUQAAL) – Radio Muqdisho
Wasaaradda Hidaha iyo tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalka suudaan ay gaarayan 150-arday oo ka kala yimid qaar ka mid ha gobollada dalka, iyadoo garoonka Aadac Cadde ee magaalada Muqdisho ay ka duuleen arday gaaraysa 105-arday halka 45-ta kale ee arday maanta iyana ay ka amba baxeen magaalada Garoowe ee maamulka Puntland.
Agaasimaha Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare Mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ardayda kula hadlay garoonka Aadan Cadde ayaa kula dar-daarmay in si wanaagsan ay wax u bartaan si hadhow ay u anfacaan ummadda Soomaaliyeed, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku hamineyso deeeqo kale oo ay helaan dowladaha saaxiibka dhow la ah Soomaaliya.
ardayda heshay deeqdani waxbarasho ayaa sheegay in ay ku farax-sanyihiin in maanta ay dalka Suudaan ay u aadan waxbarasho islamarkaana waxa ay sheegeen in dalkooda iyo dadkooda ay wax u soo baran doonaan.
Dowladda Suudaan ayaa ka mid ha dowladaha sida weyn Soomaaliya uga taageera dhanka waxbarashada, iyadoo ay wax ku soo barteen dad badan oo Soomaaliyeed, kuwa kalena waxbarasho ay u joogaan dalkaasi.
Wasaaradda Haweenka Oo Sheegtay in Sharciga xakameynta gudniinka fircooniga Goordhow la soo saari doono "Sawirro+MUUQAAL"